Ny automatisation an-trano dia ny fanitarana ny trano ho an'ny trano. Izy io dia mandeha ho azy ao an-trano, ao an-trano na any an-trano. Ny automatisation an-trano dia mety ahitana fanaraha-maso afovoany ny jiro, HVAC (fanamainana, rivotra ary rivotra), fitaovana, hidin-trano vavahady sy varavarana ary rafitra hafa, mba hanatsarana ny fitoniana, fampiononana, fahombiazan'ny angovo ary fiarovana. Ny automatisation an-trano ho an'ireo be antitra sy sembana dia afaka manome fiainana avo lenta ho an'ireo olona mety mila fikarakarana na fikarakarana andrim-panjakana.
Ny lazan'ny automatisation an-trano dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fahafaha-mividy ambony sy tsotra kokoa amin'ny alàlan'ny fifandraisana finday sy tablette. Ny foto-kevitry ny "Internet of Things" dia nifamatotra akaiky tamin'ny fampalaza ny automatisation an-trano.
Rafitra mandeha ho azy ao an-trano mampifandray fitaovana elektrika ao anaty trano. Ny teknika ampiasain'ny fiara mandeha an-trano dia misy ireo amin'ny fananganana automatique ary koa ny fifehezana ireo hetsika an-trano, toy ny rafitry ny fialamboly an-trano, ny fambolena trano sy ny fanondrahana ny tokontany, ny famahanana biby, ny fanovana ny "seho" ambiansy ho an'ny hetsika samihafa (toy ny sakafo hariva na fety) , ary ny fampiasana robot an-trano. Ireo fitaovana dia mety ampifandraisina amin'ny tambajotra an-trano hamela ny fibaikoana amin'ny solo-sainanao manokana, ary mety ahafahana miditra lavitra amin'ny Internet. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo haitao fampahalalana miaraka amin'ny tontolon'ny trano, ny rafitra sy ny fitaovana dia afaka mifampiresaka amin'ny fomba mitambatra izay ahazoana tombony, fahombiazan'ny angovo ary fiarovana azo antoka.